न्यूयोर्क मा होटल, राम्रो सस्तो विकल्प | यात्रा समाचार
न्यूयर्क यो एक महान होटेल प्रस्तावको साथ एक शहर हो, सबै प्रकार, शैली र मूल्यहरु को। पैसाको साथ तपाईले सेन्ट्रल पार्कमा उत्कृष्ट दृश्यको साथ पाँच-तारे होटेलमा ठूलो समय लिन सक्नुहुनेछ, तर यदि तपाईं रकफेलर हुनुहुन्न भने कहाँ जान सक्नुहुन्छ?
आज हामी तपाईंलाई विकल्पहरू दिन्छौं न्यूयोर्कमा राम्रो होटलहरू यद्यपि उनीहरूलाई दिइएको छैन, तिनीहरू धेरै राख्छन् मूल्य र गुणको बिच राम्रो सम्बन्ध। लक्ष्य लिनुहोस्!
यदि तपाईं एक युवा यात्री हुनुहुन्छ, केहि ठाँउ, केहि hipster, फैशनेबल, त्यसो भए तपाईं यो होटल प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ जुन शहरको सब भन्दा पुरानो हो। त्यसको बारेमा सोहोटेलभर्खरको शैलीमा सुन्दर सामानहरू, झूमर, पर्दाफास ईट्टाको भित्री पर्खाल, हार्डवुड फ्लोरहरू, र सुविधा सहित शैलीमा अपडेट गरिएको।
यो होटल SoHo बाट एक छोटो पैदल यात्रा छ, पूर्वी गाउँ, सानो इटाली, Nolita र Bowery ताकि हामी गुनासो गर्न सक्दैनौं। योसँग वाइफाइ, एक बार, रेस्टुरेन्ट र छ पाँच कोठा कोटीहरूसब भन्दा उच्च रजेन्सी प्लस हो जुन square०० वर्ग मिटर छ र पाँच व्यक्तिको लागि हो। उनीहरूसँग मिनीबार छैन तर तिनीहरूसँग एक र्यान्डोल्फ नामको एक सुन्दर बार छ बियर सलुन भुईं फ्लोरमा उत्कृष्ट जुन बर्गर र स्यान्डविचको सेवा गर्दछ।
डबल कोठा १$२ मा शुरू हुन्छ कम मौसममा उच्च मौसममा to२० सम्म। वाइफाइ अलग तिरेको छ। ठेगाना 320 341१ ब्रूम स्ट्रीट हो।
हाम्रो दोस्रो विकल्प हो टाइम्स स्क्वायरमा मोक्सी, यदि तपाईं दृश्यको मध्यमा हुन चाहानुहुन्छ, मिडटाउन। यो होटल फेसन डिस्ट्रिक्ट र टाइम्स स्क्वायरको साथ 36 XNUMX औं सडकको साथ जctionक्शनमा सेभेन्थ एभिन्यूको हलचलमा छ। भन्दा बढि छ Rooms 600 कोठा, सबै सानो, सबैभन्दा ठूलो स्टूडियो सुइट। तर तिनीहरू सुन्दर छन् र यबु पुशलबर्ग भनिने एक धेरै फेसनल फर्मले डिजाइन गरेको छ।
तटस्थ र colorsहरू, केही देहात टचहरू, ती सबैमा टेलिभिजन, वर्षा, दोस्रो तल्लामा पट्टि पनि खाना र एक सेवा गर्दछ छत बार न्यूयोर्कमा सूर्यास्त हेर्न वा बिहानको ब्रेकफास्ट खानको लागि। को हिस्सा हुनुहोस् मारियट चेन र दरहरूमा सुरू हुन्छ 176 डलर
तेस्रो विकल्प हो होटल अल्फ, डाउनटाउन म्यानहट्टनमाराम्रो संग रंगीन। यो वित्तीय जिल्लामा विलियम र नासाउ सडकहरूको बीचमा अवस्थित छ, त्यसैले तपाईं वर्ड ट्रेड सेन्टर वा वाल स्ट्रीट वा पूर्वी नदी बोर्डवाकमा १ 15 मिनेट भन्दा कममा हिंड्न सक्नुहुन्छ।
यो छ १२128 आधुनिक कोठा मूल कुरा (डेस्क, टेलिभिजन, कफी निर्माता, सुरक्षित, बोतल पानी र कपाल ड्रायर) संग। उनीहरूसँग मिनीबार छैन, ओछ्यान आरामदायक छन् र केही कोठामा राम्रो विचारहरू छन्। योसँग सानो बार, एक पछाडिको क्षेत्र, जिम, व्यवसाय केन्द्र, र २ center घण्टाको खाजा बार छ केमा छैन यो एक रेस्टुरेन्ट हो तर यसलाई बटलर भनिन्छ आफ्नै सेवा मार्फत बाहिर अर्डर गर्न सकिन्छ।
डबल कोठाबाट सुरू हुन्छ $ १ off० सिजनबाट उच्च मौसममा २260० सम्म। ब्रेकफास्ट वैकल्पिक हो र प्रति व्यक्ति $ १० र $ २० बीचको हुन्छ। वाइफाइ नि: शुल्क छ। ठेगाना -10 -20 --49 एन स्ट्रिट हो।
फ्रीhand Flatiron जिल्ला मा छ र एक हो होस्टलको साथ होस्टलको मिक्सउनी, केहि फेसनशील जो मियामीमा जन्मे र न्यूयोर्कमा आए। यो एउटा पुरानो होटेल, जर्ज वाशिंगटनमा चल्दछ जुन पूर्ण रूपमा पुनर्स्थापित भएको छ र यस आराम र शान्त मिश्रणमा रूपान्तरण भएको छ जुन तपाईं फोटोहरू लिन रोक्दैन।
कोठा विकल्पहरूमा बunk्क बेड, किंग, रानी बेड, र तीनका लागि कोठा समावेश छन्। त्यहाँ दुई रेस्टुरेन्टहरू छन्, सिमोन र द ह्वेल र स्टुडियो, खाजा र बेलुकाको भोजनको लागि, र क्याफे क्याम्पस सिम्ले र गो खाजा र नाटकको लागि। दरहरू $ ११113 बाट सुरू हुन्छ।
तिमी मनपराउँछाै ब्रूकलिन? त्यसोभए तपाईं प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ एनयू होटल, जुन स्मिथ स्ट्रिटमा अपार्टमेन्ट भवन भित्र संचालन हुन्छ, साइट जुन कोब्बल हिल, पार्क स्लोप वा प्रोस्पेक्ट हाइट्स जस्ता छिमेकीहरूमा सजीलो पहुँच प्रदान गर्दछ। यो ब्रूकलिन ब्रिजबाट दश मिनेट पैदल यात्रा गर्नुहोस् र मेट्रोको नजिक यो सानो छ बुटीक होटल खुला भान्छाको साथ जुन हरेक बिहान नास्ता सेवा गर्दछ र गर्मीमा बाहिर यसको टेबुल लिन्छ।
कोठामा माउन्ट जस्तो अनुभव छ, तिनीहरू सरल, आरामदायक र धेरै काठको साथ छन्। त्यहाँ छन् नि: शुल्क बाइक, २ 24 घण्टा जिम, वाइफाइ र कोठा सेवा। छ Rooms rooms कोठाs र सुटहरू तपाईको सामान्यतया म्यानहाटनमा देख्नुहुने तुलनाको तुलनामा ठुलो हुन्छन्। त्यहाँ डबल बेड, बunk्क बेड र एक झूला संग एक कोठा छ।
बिहानको खाजा मात्र दिइन्छ। दरहरू? एक डबल कोठा को लागी $ १149। बाट कम मौसममा उच्च मौसममा 379 85 to सम्म। वाइफाइ नि: शुल्क छ। ठेगाना Smith XNUMX स्मिथ स्ट्रिट, ब्रूकलिन हो।
तपाईं छाना मन पराउनुहुन्छ? त्यसोभए तपाईं सोहोमा सर्नुहोस् र मा रहन सक्नुहुन्छ आर्लो सोहो। यसले साना कोठाहरू प्रस्ताव गर्दछ, कुलमा 325२,, तर राम्रोसँग डिजाइन गरिएको र पर्याप्त सेवाहरूको साथ। त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, छत संग, ब views्क बेडका साथ, शहरको दृश्यको साथ ... तर अवश्य पनि, होटल यसमा रहेको टेरेसको लायक छ, महान, किनकि यसले उत्तम चित्रको प्रतीक दिन्छ। शहरी ओएसिस तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि।
कोठामा मिनीबार, फ्ल्याट स्क्रिन टिभी, डेस्क र वाइफाइ छन्। त्यहाँ एक लबी बार र एक राम्रो आँगन पनि छत पट्टीमा थपिन्छ। त्यहाँ २ 24 घण्टा बजार पनि छ। कोठा १$ $ मा सुरू हुन्छ। २231१ हडसन स्ट्रिट, SoHo मा अवस्थित छ।
नेदरल्याण्डबाट आएको चेन, CitizenMन्यूयोर्कमा तपाईंको होटल छ। यो अवधारणा को बारे मा छ «लक्जरी लक्जरी«। होटलमा २१ फ्लोर छन् र २०१ 21 मा खोलिएको छ। यसले प्रस्ताव गर्दछ २230० साना कोठाs तर आरामदायक, स्विस फर्नीचर संग,aटेरेसमा पानोरामिक दृश्यहरूका साथ बार, एक क्याफेटेरिया जुन २ hours घण्टा खुल्छ र एक धेरै ठाँउ सेटिंग।
डबल कोठाको मूल्य छ $ २। .170। बाट। होटल २१218, पश्चिम T० थ्री स्ट्रिटमा छ।
अन्त्यमा, ब्रूकलिनमा अर्को होटल: EVEN होटल। यो एक हो शान्त होटल, आराम गर्न वा कार्य गर्न खाली ठाउँको साथr, खेल र पुस्तकहरूको साथ। त्यहाँ योग वा स्पिन वर्गहरूका लागि स्टुडियो पनि छ। यसले वाइफाइ, रेस्टुरेन्ट, कोठा सेवा र कोठामा सुरक्षित, नुहाउने उत्पादनहरू, स्पा स्नान र मिनी बार प्रदान गर्दछ।
माथिल्लो तलाको कोठाबाट हेराइहरू निराश हुनेछैनन्। आमेन सातौं तलामा खुला बार छ एक राम्रो छिमेक दृश्यको साथ, केहि अनौंठो विचार गरीरहेको छ यो न्यू योर्क हो।
डबल कोठाको दर छ कम मौसममा १ 195। डलरबाट उच्च सीजन मा 305 गर्न। बिहानको खाजा अलग छ र यसको मूल्य प्रति व्यक्ति $ २० र $ between० बीच छ। EVEN होटेल Ne 20 नेभिन स्ट्रीट, ब्रूक्लिनमा अवस्थित छ।
सबै समीक्षा गर्न असम्भव छ न्यूयोर्क होटेलहरूk, त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन्, त्यसैले यदि तपाईं आफ्नो खोजीमा वेबमा डुबुल्की मार्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यी विविध विकल्पहरू विचार गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यमानी!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » न्यूयर्क » न्यूयोर्कमा होटलहरू, राम्रो सस्तो विकल्पहरू